ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် အီဆုဇူကားများ | အီဆုဇူကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Blue Isuzu D-Max 2004 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစန...
Black Isuzu D-Max 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစ...
2005 Isuzu D-MAX ISUZU
အီဆူဇူဟာ မြို့ပြင် ဟိုက်ဝေးကားမောင်းနှင်မှုတွေမှာ ပိုမို အသုံးများကြတဲ့ကား တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန် နိုင်ငံက လာတဲ့ အီဆူဇူး ဟာလည်း မြန်မာပြည်မှာ ရေပန်းစား အောင်မြင်တဲ့ ကား တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သူရဲ့ အောင်မြင်မှုက လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်နဲ့ အက်စ်ယူဗီ မှာပဲ များပြီး အခြား ကား အမျိုးအစား များ ကတော့ မသိ သလောက် နည်းပါတယ်။ အက်စ်ယူဗီ မှာ ဆိုရင် ဘစ်ဟွန်း လို့ မြန်မာခေါ် ခေါ်ကြတဲ့ ကား ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းသုံး ဆိုရင် အလတ်စား ထရပ်ကား အီးလယ်အက်ဖ် ကို သိကြ ပါတယ်။ အက်စ်ယူဗီ မှာ ဆိုရင် အက်စ်အီး ဆိုတဲ့ ကားလည်း ရှိပါတယ်။ အစ်ဆူဇူး ရဲ့ မြန်မာပြည် ရောက် လူသိများ ကား အချို့ ကိုပဲ ဖော်ပြ ပေးလိုက် ရပါတယ်။
အီဆူဇူ ဘစ်ဟွန်းတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဖော်ပြရသော် အီဆူဇူ ဘစ်ဟွန်းတွေမှာ ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်အစရှိသဖြင့် ရရှိနိင်မှာ ဖြစ်ပြီး တာဗို့ပါတဲ့ ဒီဇယ်ကားဆိုရင် အင်ဂျင် ၃.၀ လီတာ ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်ကား ဖြစ်တဲ့ အတွက် ညာမောင်း ဖြစ်မှာ ဖြစ်ပြီး ၀ယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင် ပြည်တွင်း ဂျပန်လေလံ ၀ဘ်ဆိုဒ် တော်တော်များများမှာ ကားဂရိတ် အမျိုးအစား၊ မော်ဒယ် စသည့်ဖြင့် စိတ်ကြိုက် စုံးစမ်း ၀ယ်ယူနိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မြို့ကြီးများရဲ့ လမ်းများနဲ့ အထူးအပ်စပ်မူရှိပြီး အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ်ရစ်ကားတွေကို ၀ယ်ယူသူများ အနေနဲ့ သတိပြုရမဲ့ အချက်တစ်ခုမှာ အရင် ၀ယ်ယူသူများရဲ့ ဝေဖန်မှုများ အရ ကီလိုမီတာ ၁ သိန်း နီးပါးလောက်မှာ တာဗို့ကနေ ဆူညံသံ ထွက်တာကို တွေ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အသစ်တာဗို့ တစ်ခုနဲ့ လည်ပြီး ချိန်မှာတော့ အဆင်ပြေသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီဇယ် အော်တိုကားတွေ ဖြစ်ပြီး လေအိတ် နှစ်လုံး၊ အဲယာကွန်း၊တာဗို့၊ ပါဝါ စတီယာရင် ၊ အလွိုင်းဝှီးစတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ပါရှိပြီး တံခါး (၅) ပေါက် အက်စ်ယူဗီ ကား ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းက ထင်ရှားတဲ့ အီဆူဇူ ဘရန်များ
ပြည်တွင်း ထင်ရှားတဲ့ မော်ဒယ်များအနေနဲ့ အီဆူဇူ ဘစ်ဟွန်း၊ အီဆူဇူ အက်စ်အီး၊ အီဆူဇူ အီးအယ်အက်ဖ် စတဲ့ကားတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဆူဇူ ဘစ်ဟွန်း က မစ်ဆူဘီရှီ ရဲ့ ပါဂျဲရိုး နဲ့ အပြိုင် ဖြစ်တဲ့ ကား ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သူက ဈေး ပိုသက်သာ ပါလိမ့်မယ်။ သိသိ သာသာ ကို သက်သာ ပါတယ်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ် မော်ဒယ် ဒီဇယ် ကား ဆိုရင် သိန်း ၁၃၀ ကျော် နဲ့ ရနိုင် လောက်တဲ့ အထိ ဈေးသက်သာ ပါတယ်။ ပုံစံ အားဖြင့် ကလည်း ပါဂျဲရိုး မြင်နေကျ မဟုတ်ရင် ချက်ချင်း မခွဲ တတ် ပါဘူး။ အင်ဂျင် အရွယ် ကတော့ ၃၀၀၀ စီစီ အရွယ် ဝန်းကျင် ရှိပြီး ပိုကြီးတဲ့ အင်ဂျင် အရွယ် တွေနဲ့လည်း ထုတ်လုပ် ပါသေး တယ်။ တံခါး ငါးပေါက် ညာမောင်း ကား ဖြစ်ပြီး မြန်မာ ပြည်လမ်း စနစ် နဲ့ သင့်တော် ပါတယ်။ လေးဘီးယှက် ကား ဖြစ် တာကြောင့် ဆီစား ကတော့ မသက်သာ လှ ပါဘူး။ အရောင် အားဖြင့် လည်း အစုံ ထုတ်လုပ် ထားတာ ကြောင့် ရွေးချယ် ဝယ်ယူ နိုင်ပါတယ်။ အက်စ်အီး အက်စ်ယူဗီ ကတော့ ဘစ်ဟွန်း ထက် အနည်းငယ် သေးတဲ့ ကား လို့ ဆိုနိုင် ပါတယ်။ အင်ဂျင် အရွယ်က အစ သေးပါတယ်။ ၂၅၀၀ စီစီ ဝန်းကျင်ခန့် ရှိပြီး မော်ဒယ် ကတော့ ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈ တွေ အထိလောက်လည်း ရောက်ပါတယ်။ ဈေးကလည်း ဘစ်ဟွန်းနဲ့ သိပ် မကွာ ပါဘူး။ အရွယ်သေးတာ ကြောင့် တံခါး ၂ ပေါက် အီစ်ယူဗီ အငယ်စား ကား ဖြစ်ပြီး ၂ ဘီးမောင်း စနစ်ကို အသုံးပြု ပါတယ်။ လူကတော့ လေးယောက် စီးလို့ ရပါတယ်။ နောက်ဘီး မောင်း စနစ်၊ ရှေ့ ဘီးမောင်း စနစ် အစ ရှိသဖြင့် ထုတ်လုပ် တာ ကြောင့် ဆီစားလည်း ပို သက်သာ ပါတယ်။ အရောင် လည်း အစုံ ထုတ်ပါတယ်။ အီဆူဇူး ELF ဆိုတာ ကတော့ အလတ်စား ထရပ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၆၀၀ ကီလိုဂရမ် သယ်ဆောင်နိုင် ၂၀၀၄ မော်ဒယ် ဆိုရင် လူကြိုက်များ ကြပြီး အခြားသော ခုနှစ် မော်ဒယ်နဲ့ တန်ချိန် အမျိုးအစား ကိုလည်း ဝယ်ကြ ပါသေးတယ်။ သို့ပေမယ့် ယင်း ဝန်းကျင် တွေပါပဲ။ အင်ဂျင်က ၃၁၀၀ စီစီ ရှိတာကြောင့် အားကောင်းတဲ့ ကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ ပြည် နေရာ အနှံ့ အများမှာ လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် အဖြစ် အသုံးပြု ကြတဲ့ ကား ဖြစ်ပါတယ်။
အီဆူဇူး ဝယ်ဖို့ အတွက် အများစု က ဂျပန် လေလံ ဈေးကွက် ကနေ ဝယ်ယူ ကြပါတယ်။ ရန်ကုန်က အရောင်း စင်တာ တွေမှာ လည်း ရောင်းချ ကြ ပါတယ်။ တစ်ပတ်ရစ် ကားကိုပဲ ပိုအားထား ဝယ်ကြပြီး အသစ် ကိုလည်း ဝယ်ယူ ကြပါ သေးတယ်။ အီဆူဇူးက မြန်မာပြည် ဝင်လာ တော့မှာပါ။ အဲ့ဒီ အချိန် ကျရင်တော့ သူ့ အမှတ်တံဆိပ် ထဲက ကား အသစ် အတော် များများကို ရရှိ နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အီဆူဇူ ဘရန်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ အကြောင်းအရာ
အီဆူဇူရဲ့ ဒီမတ်ခ်ျ အမျိုးအစားထဲမှာ နောက်ပိုင်း ၂၀၁၂ကနေ စထုတ်တဲ့မော်ဒယ်တွေအတွက် ဒီဇိုင်းပိုင်းကို အသားပေးပြီး စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို တိုးမြင့်လာခဲ့ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ထိုကားတွေကို ထိုင်း၊ မလေးရှားနဲ့ ဖိလစ်ပိုင်မှာ ရှိတဲ့ အီဆူဇူ စက်ရုံတွေမှာ တပ်ဆင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တံခါး နှစ်ပေါက်၊ တံခါး ၄ပေါက်ကားတွေနဲ့ ၂၅၀၀ စီစီဒီဇယ်၊ ၂၅၀၀ စီစီ တာဗို့ ဒီဇယ် စတဲ့ကားတွေကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၃၀၀၀ စီစီ ဒီဇယ်တွေကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂီယာ ၅ချက် အော်တိုဂီယာအပြင် မန်နျူးယယ် ဂီယာ ၅ ချက်တွေကိုပါ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။